Momba anay - Leadpacks (Xiamen) Environmental Protection Packing Co., Ltd.
Kitapo T-shirt / kitapo
Kitapo fiantsenana / kitapo mitondra
Kitapo fisaka / kitapo mihodina
Kitapo fandefasana mailaka
Kitapo misy lamina
Kitapo vita amin'ny aluminium
Leadpacks (Xiamen) Fiarovana ny tontolo iainana Co., Ltd. dia naorina tamin'ny taona 2009 ary manolo-tena amin'ny fonosana plastika. Nanomboka ny fikarohana momba ny kitapo misy ny biodegradable tamin'ny 2014, ary nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny famokarana kitapo azo simba sy azo zakaina tamin'ny taona 2016. Nahazo ihany koa andiam-panamarinana mifandraika amin'izany izahay DIN EN13432 voamarina, voamarina ISO, tatitry ny fitsapana an'ny FDA, SGS, ary ireo patanty sns.
Ny orinasanay dia manarona faritra mihoatra ny 6000 metatra toradroa ary manana milina mandeha ho azy mihoatra ny 50, ao anatin'izany ny milina mitsoka horonantsary, milina fanontana haingam-pandeha 11 loko, milina fanaovana kitapo, sns. Fantaro tanteraka ny famokarana mandeha ho azy. Tsy mampihena ny vidin'ny famokarana sy ny vidiny fotsiny izany fa manatsara ny fahombiazan'ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra. Avelao ny mpanjifanay hahazo ny vidiny tsara indrindra ary sy ny kalitao tsara indrindra ary ny serivisy tsara indrindra.
"Famokarana azo antoka, kalitao voalohany" no filozofianay momba ny ozinina. Manana andiana mpiasa teknika mirotsaka amin'ny traikefa famokarana nandritra ny taona maro tao amin'ny indostria sy ny matihanina QC, manana antoka azo antoka ho an'ny takiana avo lenta, ny fandresena avo lenta dia nahazo ny mpanjifa avy amin'ny firenena 58 sy indostria samihafa.
Ny vokatray lehibe indrindra dia ny kitapo Biodegradable 100%, kitapo azo alaina, kitapo plastika, kitapo fonosana plastika, kitapo miantsena, kitapo mailaka, kitapo Zipper, kitapo hidy Zip, paosy mitsangana, kitapo vacuum, kitapo fisakafoanana, kitapo kafe, kitapo alimo vita amin'ny alimo, fako kitapo, sarimihetsika mihinjitra, horonan-tsarimihetsika sns.
Mba hihaonana amin'ny filan'ny mpanjifa isan-karazany dia manana ekipa mpamorona matihanina izahay, andalana famokarana kilasy voalohany ary serivisy an-tserasera 24 ora. Ny serivisy fonosana tokana dia afaka manome izay ilainao amin'ny fonosana.
Miarahaba anao ny mpiasa rehetra hitsidika sy hitarika ny orinasa.
Nahazo andiam-panamarinana mifandraika amin'izany ihany koa izahay DIN EN13432 voamarina, ISO, FDA, SGS, ary patanty sns.
Rihana faha-4, No. 25, Siming Park, Meixi Road, Tongan Dist., Xiamen City, Fujian, Sina
Ho an'ny fanontanianao momba ny vokatray, azafady aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny mailaka na WhatsApp, hamaly anao avy hatrany izahay.